Mifandraisa aminay | Orinasa Mpampanoa lalàna
ndao hiresaka, Antsoy izao izahay!
Makà fanampiana haingana araka ny lalàna
Ny orinasanay dia manao raharaham-pitsarana any Dubai na any amin'ny faritra Emirà. Mampiasa fomba hafa hamahana ny fifandirana (ADR) izahay toy ny fanelanelanana sy ny fanelanelanana. Ireto fifandirana ireto dia misy: ny adin'ny orinasa eo amin'ny tompon-tany, ny mpiara-miombon'antoka, ny tompona, ny mpampiasa vola, ny orinasa LLC ary ny fiaraha-miasa; tranga misy fanitsakitsahana fifanarahana, fisolokiana, fanitsakitsahana ny tsiambaratelo, fanolorana diso, tsy fifaninanana ary fifanarahana na fifanarahana tsy fampahafantarana; fifanolanana amin'ny raharaham-barotra isan-karazany eo amin'ny orinasa, izay mitaky mpisolo vava amin'ny lalàna sy lalàna ary mpisolovava iraisam-pirenena.
Antsoy izahay hanamboatra fanendrena ao amin'ny biraonay
Tsidiho izahay anio mba hisian'ny fifampidinihana ara-dalàna mety handefasao amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alàlan'ity taratasy ity.
Dubai, Emirà Arabo Mitambatra
Lazao anay bebe kokoa
Mpisolovava manokana sy za-draharaha
Rehefa malahelo eo amin'ny fiainana ianao indraindray dia mila olona manampy anao. Isaky ny indray mandeha, tsy misy toerana, dia manana mahery fo ianao.
Ho an'ny antso maika Contact us izao na mangataka fanendrena:
Mobile: 971506531334 + na Mobile: 971558018669 +
Mandefasa anay izao
Hevitra 31 momba ny “Mifandraisa aminay”
10/23/2014 amin'ny 6:35 maraina
Mitady mpisolovava fisaraham-panambadiana aho. Efa 7 taona nivadiana niaraka tamin’ny vadiko tany Philippines aho. Efa ho 7ans aho no mipetraka eto dubai ary niala teto ny vadiko nanomboka tamin'ny 2011. Tsy mbola naheno azy aho nanomboka tamin'ny 2012. Afaka manao divorce ve aho eto Dubai? Tsy manan-janaka na fananana vady izahay.
Tena ankasitrahana ny fanampianao.
12/08/2014 amin'ny 5:53 PM
Nanana orinasa fiara tao Dubai aho faritra .. Al-Awir tamin'ny fiaraha-miasa
Nanolotra Power of Attorney tamin'ny mpiara-miasa amiko aho mba hanolotra izany rehefa mamoaka fiara
avy amin'ny seranan-tsambo.
Te-hanaisotra io Herin'ny mpisolovava io aho.
Azafady mba ampahafantaro ahy raha afaka mamono ny herin'ny mpisolovava ianao ary ohatrinona
mety ho lany amiko izany
Mipetraka any Texas Etazonia aho izao
Manantena hihaino avy aminao tsy ho ela
04/18/2015 amin'ny 9:21 maraina
12/27/2014 amin'ny 6:17 maraina
Manana tranga iray ho an'ny namako iray izay tratra aho raha nitondra fiara tsy nisy fehikibo, taratasy miendrika fiara ary misy fanafody fitsaboana hafa tosidra ao abu dhabi.
Nosamborin'ny polisy izy ary rahampitso farany no nahenoina azy.
Noho izany, azonao atao ve ny manoro hevitra ahy hoe inona ny karazana fanampiana azonao omena anay sy ny karamanao. Mba asio fepetra maika indrindra.
12/29/2014 amin'ny 4:19 maraina
Tamin'ny volana jona lasa teo ny fiara avy tao anaty fiara iray izay no nitondra fiara iray nitondra ahy tamina nosy lozam-pifamoivoizana iray. Sahirana be aho amin'ny fahazoana onitra ho an'ny vadiko sy izaho.
01/03/2015 amin'ny 9:16 maraina
Miasa ao amin'ny Sekoly Glenelg ao Abu Dhabi aho amin'izao fotoana izao, rehefa nanao sonia ny fifanekena nataoko tamin'ny 2011 aho dia ny politikan'ny sekoly dia ny hanomezan'ny mpiasa fampandrenesana 3 volana rehefa miala (araka ny voalazan'ny Boky Torolàlana ho an'ny Fakiolte nomena anay). Amin'ny ankapobeny amin'ny volana janoary dia manao sonia taratasy fikasana isika milaza na te hiverina na tsia amin'ny taom-pianarana manaraka, fa ny fametraham-pialana dia nekena niaraka tamin'ny fe-potoana 3 volana nampahafantatra nandritra ny taona. Tamin'ity taona ity dia nanampy fanambarana ny sekoly fa ny fametraham-pialana rehetra atolotra aorian'ny 30 Janoary dia hotsipaka. Ny fanontaniako dia ara-dalàna ve ny manao izany?? ary afaka mandà tsy hanao sonia ve aho?Indrindra fa ny ankamaroan'ny sekoly dia manomboka mandray mpiasa amin'ny volana febroary.
01/04/2015 amin'ny 6:59 maraina
Mila fanampiana amin'ny fakana hery manokana ho an'ny mpisolovava iray aho hamolavola ny fanakatonana orinasa iray any Abu Dhabi. Afaka manampy amin'izany ve ianao?
01/08/2015 amin'ny 8:50 maraina
Izaho dia GM ny masoivoho mpitrandraka ao amin'ny FIANAKAVIANA FIVORIANA FIANAKAVIANA INDIA, te-hametraka fitarainana amin'ny mpiara-miasa iray an'ny LLC aho izay niteraka fatiantoka tamiko tamin'ny famoahana antontan-taratasim-barotra ho an'ny fahazoana olona manankarena indiana 100 an'ny olombelona. Mandany manodidina ny 20000AED eo ho eo amin'ny fisintonana ny mpirotsaka hofidina mpilatsaka hofidina izahay no nifidianan'izy ireo ny olona namoaka taratasy natolotra ary ankehitriny dia mikasa ny hanemotra ny fizotran'ny visa efa ho 4 izay nanimba ny fanodikodinantsika, ny adin-tsaina ary ny fatiantoka ara-bola.
Ahoana no ahafahantsika mametraka suite ara-dalàna hanoherana azy ireo ary inona no hataonao?
01/13/2015 amin'ny 5:34 maraina
Manana fanontaniana aho:
Izahay mivady dia manana fananana ao Dubai izay samy manana anarana sy finday. miampy ny kaontiko amin'ny bankiko manokana ary manana ny azy izy.
Miala any Dubai ho any amin'ny firenena niaviantsika ho tsara izahay, fa mitahiry ny fanananay sy ny kaontin'ny bankanay.
Mila toro-hevitra momba ny:
inona no fomba ara-dalàna tsara indrindra izay manome antsika hery lehibe amin'ny fananan'ny tsirairay avy.
Raha misy ny fahafatesana na coma, na na ny te-hivarotra ilay fananana aza no tadiavintsika fa ny iray aminay ihany no tonga eto Dubai mba hikarakara ny zava-drehetra ka tsy mila ny roa ho avy any Dubai.
Ary ahoana no ahafahantsika manana fahefana feno amin'ny kaontin'ny banky tsirairay?
Afaka mahita mpisolovava iray ao amin'ny orinasanao ve izahay mba hanoro hevitra momba an'io olana io?
01/22/2015 amin'ny 12:22 PM
Mila fanampiana amin'ny fisaraham-panambadiana aho, indrindra fa ny fizarazarana ny fananana sy ny fitsipika mitovy.
02/01/2015 amin'ny 9:31 maraina
Salamvalekum mamelà ahy hampahafantatra ny tenako fa mpisolovava ao amin'ny lisitry ny Andhrapradesh Bar Council of India ny vadin'ny rahavaviko dia maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana tao Sohar of Oman azafady mba ampahafantaro anay ny fomba fitakian'ny mpandova ara-dalàna ny onitra avy any India. azo ampiharina sy izay antontan-taratasy ilaina amin'izany sns., Mba ampio aho amin'ny fahazoana onitra ho an'ny rahavaviko manan-janaka roa tsy ampy taona, mifandray aminao aho manantena fa hitarika ahy araka ny tokony ho izy.
Misaotra anao tompoko / madama
04/18/2015 amin'ny 9:18 maraina
02/06/2015 amin'ny 1:52 PM
Manana fanontaniana aho momba ny fifanarahana nataoko tamin'ny klioba baolina kitra ..Eny, niasa tao amin'ny klioba Football tany Dubai aho tamin'ny taon-dasa ary tsy nanaja ny fifanarahana nataoko ny klioba satria tsy voaloa tanteraka aho. Araka ny fifanarahana dia mahazo NY BONUS MONEY ho an'ny lalao izahay ( valim-pifidianana na fandresena )..Rehefa nandao ny klioba aho dia tsy nandoa izany izy ireo ary tsy noraharahainy fotsiny ny fangatahako handoa ahy amin'ny alàlan'ny mailaka…
Tena ankasitrahako indrindra raha manome torohevitra ahy momba izay hatao aho hahazoana ny volako. Niezaka ny hifandray tamin'ny mpitantana fanatanjahantena klioba aho hiresaka momba an'io olana io fa tsy niraharaha ny mailaka fotsiny aho…
02/17/2015 amin'ny 8:47 maraina
Manahoana, manontany tena aho raha manao ny marimaritra iraisana amin'ny maha-marim-pototra anao amin'ny maha-marim-pototra anao. Niditra vola 2 tany Dubai izahay tamin'ny 2008. Tsy namela sy namela anay ary an-jatony ny mpamolavola teo aloha. Mandra-pahatongan'ny andro nandrenesanao fa nisy ny komity vaovao niforona izay nijery ireo tetikasa rehetra voaroaka ary niandraikitra na nandoa sy nandoa vola tamin'ireo mpampiasa vola voalohany izay niaritra an'io. Hita teo amin'ny haino aman-jery rehetra sy ny vaovao tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary nifandray tamin'ny fivoaran'ny Q vaovao mpamorona izahay. Ny tetik'asanay dia fomba fijery maitso eran-tany 2 sy 3 ary izahay dia nandoa hetra 551000. Manana ny antontan-taratasy rehetra sy ny fanambarana momba ny banky. Nanontany tena izahay raha afaka manampy amin'ny fanelanelanana sy hanampy amin'ny famerenam-bola izahay. Efa nifanerasera tamin'ny mpamorona izahay fa ny safidy azon'izy ireo dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra heverinay fa mendrika azy aorian'ny fiandrasana an'ity taona maro ity. Raha afaka mandefa mailaka ahy ianao, afaka miteny bebe kokoa momba ity raharaha ity. Misaotra tompoko.
03/06/2015 amin'ny 4:26 PM
(ity hafatra ity dia tsy fanoloran-tena hidirana ny serivisy ara-dalàna, tsy misy sarany hamakiana ny famakianao na ny famalianao an'io hafatra io, ary tsy hisy fiampangana na haba aloa raha tsy fanamafisana an-tsoratra momba ny fiaraha-miasa avy amiko)
Salama – nodomin'ny mpamily Emirati avy ao aoriana ny môtôko tamin'ny 13 Feb ary nentina tany amin'ny hopitaly aho tamin'ny rantsantanana tapaka sy tapa-tongotra mafy. Lehiben’ny polisin’ny RAK ilay mpamily, 14 ny fandikan-dalàna tsy voaloany tamin’ny fandehanana mafy, lany daty tamin’ny fotoana nisehoan’ny loza. Ny tatitra momba ny tranga voalohany dia manamafy fa ny mpamily no tompon'andraikitra ary manana raharaha ara-pitsarana aho amin'ny 12 Mar amin'ny 0900 ao amin'ny Mulla Plaza.
Azo atao ve ny mametraka fitakiana valisoa amin'ity mpamily ity? Manana vidiny fanamboarana môtô, volavolan-pitsaboana sy fanarenana aho, fanoloana 6000 / - akanjo vita amin'ny moto simba, fahaverezan'ny vola, disfigurie amin'ny tongotro sy rantsantanana very.
04/18/2015 amin'ny 9:17 maraina
03/06/2015 amin'ny 8:58 PM
Noroahina ny taona lasa aho noho ny fomba fiasa na fandaminana. azonao manampy ahy ve ny hampiakatra io fandrarana io? afaka miverina any Dubai aho .Afa tsy misy heloka bevava intsony aho.Dia nandeha nitsena ny gf tany an-tranony tany Dubai aho ary niaraka tamin'izay koa ny polisy nanao trano fisavana ary nosamborin'izy ireo ihany koa aho. ho an'ny gf an'ny raharaha ???? tranga lehibe io? azonao atao ve ny mitari-dalana
04/16/2015 amin'ny 5:10 maraina
Eo am-pitadiavana mpisolovava na orinasa mpanao lalàna aho, manam-pahaizana manokana amin'ny fikarakarana raharaha momba ny fitsaboana any Dubai. Afaka manampy ve ianao?
04/19/2015 amin'ny 7:42 maraina
Karavasy ny tendako havia ny 15 aprily 2015 lasa teo noho ny fianjeran'ny fiara tao ambadiky ny taxi ( izaho sy ny namako hafa no mpandeha amin'io taxi io). Tsapako fa ny masoko havia sy ny sofiko havia dia voa mafy noho io trangan-javatra io… Manana ny mombamomba ny fiarakaretsaka sy ny Ford Escape aho izay sendra fiara nidona tao ambadiky ny taxi-be… Afaka mangataka onitra ve aho raha ohatra ny karavasy nataoko dia malefaka fotsiny...
05/03/2015 amin'ny 3:45 PM
Eny, azo atao, mangataka ny hiantso sy hitsidika anay miaraka amin'ireo antontan-taratasy .. 050 6531334
05/03/2015 amin'ny 10:56 maraina
Manana fifanarahana amina orinasa iray any Dubai aho, Delite Trailers LLC no nantsoinay mba handray ilay sblc $ 3 tapitrisa izay nomenay azy ireo tamin'ny alàlan'ny banky "Mashreq Bank Psc".
Nanamafy ny banky hanatanteraka ny fifanakalozana ny banky ary mitentina 300,000.00 tapitrisa dolara ny fandefasana ny fifanakalozana ary tampoka fotsiny dia nisintona ny banky sy ny mpanjifa, tsy nisy antony manokana.
Inona no azontsika atao mba hamerenana ny fandaniana?
05/03/2015 amin'ny 3:40 PM
eny, azo atao .. tsara fanahy mihaona aminay amin'ny antontan-taratasinao ..
05/04/2015 amin'ny 3:25 PM
Andriamatoa Humphrey, misaotra amin'ny fandefasana ireo antitra .. efa nandinika azy ireo izahay ary afaka mametraka raharaha, hifandray izahay ary hanao izay ilaina. Misaotra.